Ciidanka Dowladda oo Howlgal qorsheysan sameeyay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Ciidanka Dowladda oo Howlgal qorsheysan sameeyay
Ciidanka Xoogga dalka gaar ahaan kuwa Qeybta 60aad ee ka howgala deegaanada Maamulka Koonfur Galbeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgalo qorsheysan ka fuliyay deegaano ka tirsan Gobolka Baay.
Ciidamada Xoogga ayaa howlgalkaas sigaar ah uga fuliyay deegaanada kala ah Tuko-rooste iyo laba-warood oo ku yaalla duleedka Degmada Diinsoor, halkaas oo la sheegay in xiliyada qaar ay tegaan xubno ka tirsan Al-shabaab.
Taliayaha Ciidanka Milateriga Diinsoor laba xidigle Cali Xasan Cali oo howlgalka hogaaminayay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in Ujeedka howlgalkaas la sameeyay uu ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga deegaanada ay Ciidanka tageen.
Waxaa uu sheegay Taliye Cali Xasan in xubno ka tirsan Al-shabaab ay mararkood ku gubaan gaadiidka soo gala deegaanada Tuko-rooste iyo laba-warood, ayna dadka halkaas ku sugan qabaan dhibaatooyin kala duwan, waa sida uu hadalka Taliyaha.
Ugu dambeyn Taliayaha Ciidanka Miteriga Diinsoor ee Gobolka Baay ayaa waxaa uu sheegay in howlgalada ka dhan ah Al-shabaab ee ka socda Gobolka ay sii wadani doonaan, isla markaana ay doonayan inay qabsadaan deegaano gacantooda ka maqan.
Maqaal horeDad loo xiray Banaanbixii ka dhacay Magaalada Muqdisho
Maqaal XigaDuulimaadyada gudaha Dalka oo saaka dib u furmay